Fitaovana fanariana sinoa - Casting Minghe
Minghe Casting dia manolotra karazana fizotran'ny Die Casting Aluminium mba hamokarana ampahany matevina maty sy matevina amin'ny alàlan'ny fandeferana avo lenta.
Minghe no mpanamboatra ampahany amin'ny famafazana zinc faratampon'i Sina, manolotra singa zatra mariazy zinc mazava ho azy ho an'ny fampiharana isan-karazany.
Minghe Casting dia manolotra fantsom-panafahana maty manezioma hamokarana ampahany marina sy sarotra magnesium maty manana fandeferana avo lenta.
Minghe dia avy any Shina mpanamboatra fampiasa amin'ny famolavolana alimina fanodinam-bolam-panjakana sy ny singa misy ny serivisy fanodinana aluminium, misy ny famolavolana bobongolo, ny endrika famolavolana ary ny injeniera.
Minghe Casting dia manolotra serivisy fanariana fasika vita amin'ny alim-by ary fantsom-pandrika fasika amina aluminium, fanamboarana lasitra, faritra misy ny masinina cnc, famokarana betsaka, fitsaboana ambony, sns.
Fitaovana fanariana bebe kokoa
Minghe Die Casting Company no mpanamboatra ampahany manaparitaka faratampony any Sina, manolotra ampahany betsaka amin'ny fametrahana fitaovana marim-pototra famokarana vy ho an'ny fampiharana isan-karazany.